कुमार र उनीहरू | Makalukhabar.com
कुमार र उनीहरू
असार ५ गते दिनभर जस्तै सर्लाही–लालबन्दी १ लखन्ती खोलामा भएको घटनाले सनसनी मच्चायो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश २ मुख्यालय र सर्लाही जि.प्र.का.ले ‘विप्लव समूहका कार्यकर्ता सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको र उनको साथबाट हतियार बरामद भएको’ भन्ने साबिती बयान सञ्चार माध्यम र जनतालाई दिएर अचम्मको बहादुरी प्रदर्शन गरेको प्रचार गर्दै थिए ।
तर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नीति न सरकारी सुरक्षाकर्मीउपर हमला गर्ने नै छ, न त सशस्त्र युद्धको घोषणा नै छ । त्यसैले हामी ढुक्क थियौँ– यो नक्कली र झूट्टो प्रचार मात्रै हो ।
प्रिय पाठकवृन्द ! एकछिन आँखा बन्द गरेर सोचौँ त– यो कति क्रूर र निर्दयी घटना छ ! के यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दैन ? यसैगरी बर्दी र बन्दुकको दुरुपयोग बढ्दै जाने हो भने र यसको विरुद्धमा क्रान्तिकारीहरूले पनि बन्दुक उठाउने हो भने के होला देशको स्थिति ? के हाम्रो प्रहारको सामना गर्न सक्छन् दलालहरू ?
आमा बेचेर बोरामा पैसा पोको पार्ने दलालहरूलाई न देशको चिन्ता छ, न त जनताको । यिनलाई चिन्ता छ युद्धले निम्त्याउने भयङ्कर विपत्तिको ।
निःशस्त्र कार्यकर्ता कुमारको टाउकोमा गोली ठोकेर बडो पुरुषार्थ देखाए भन्ने हत्याराहरू के जनताको बन्दुकका सामु उभिन सक्छौ ? फायर जनताले पनि खोले भने के होला नेपालको हालत ? आमा बेचेर बोरामा पैसा पोको पार्ने दलालहरूलाई न देशको चिन्ता छ, न त जनताको । न यिनलाई चिन्ता छ युद्धले निम्त्याउने भयङ्कर विपत्तिको ।
निधारमा हात राखेर सोच्नुस् भ्रष्टाचारले खोक्रो बनाएको, इमानदारी र नैतिकताको खडेरी परेर अस्तव्यस्त भएको मुलुक र समाजको अवस्था अनि निकाल्नोस् निष्कर्ष र बढाउनोस् पाइला ! कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेता, कार्यकर्ता राष्ट्रको बर्बादीका निम्ति जिम्मेवार छन् भने लखन्ती खोलाको बाटो ढुकेर नक्कली मुठभेडमा कुमारहरू मार्नै पर्दैन ।
आदेश जारी गर्नोस्– हामी प्रहरी हेडक्वार्टरमै आउँछौँ, खुलामञ्चमा लगेर फाँसीमा झुन्ड्याउनुहोस् । हामी हाँसीहाँसी मृत्युवरण गर्न तयार छौँ । तर राष्ट्र र जनताको बर्बादीको जिम्मेवार वर्तमान दलाल र फासिवादी पार्टी र तिनका नेता हुन् भने तपाईंलाई तिनको आदेश मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । तपाईं आफूलाई किन कलङ्कित बनाउनुहुन्छ ? जब एकदिन वास्तविकता सतहमा आउँछ, तपाईंको आत्माले कहाँ पाउँछ शान्ति ? जब तपाईंको सन्तानले सोध्नेछ,‘बाबा, कुमार अङ्कललाई किन गोली हान्नुभो ?’ तपाईंको छाती पीडाले भत्भती पोल्नेछ । छोरालाई के जबाफ दिनुहुन्छ ? त्यतिबेला के आफूलाई नढाँटी गर्वका साथ भन्न सक्नुहुन्छ– त्यो अपराधी थियो, ठोकिदिएँ गोली ! सक्नुहुन्छ भन्न ? अहँ सक्नुहुन्न, कदापि सक्नुहुन्न किनकि मानिसले दुनियाँमा सारा संसारलाई ढाँट्न सक्छ तर आफूले आफैँलाई कदापि ढाँट्न सक्दैन ।
५ गते लखन्ती खोलामा नक्कली मुठभेडमा मारिएका कमरेड कुमारको तस्बिर पहिलोपटक सार्वजनिक भयो सञ्चारकेन्द्र भन्ने अनलाइनमा । म धेरैबेर घोत्लिएँ फोटोमा किन कि त्यहाँ मेरो एक सहयोद्धा थियो र थियो ऊ मृत । मलाई जोडजोडले कमरेड कुमार, कमरेड कुमार भनेर बोलाउन मन लाग्यो । उनलाई अँगालोमा बेर्न मन लाग्यो किन कि चुरेको पाखैपाखा हामी सँगसँगै हिँडेका दिनहरू ताजै छ मेरो मानसपटलमा । तर कुमार यतिबेला कहिल्यै नफर्किने गरी सहिदहरूको पङ्क्तिमा लामबद्ध भइसकेका छन् ।
आमा, मैले तिमीलाई देशद्रोही जुवाडेको हातबाट मुक्त गर्न सकिनँ, मलाई माफ गर । तस्बिरमा देखिन्छ भाँचिएको हातमा थमाइएको पेस्तोल– मानौँ पेस्तोलले भनिरहेछ मरेको मान्छेको हातमा मेरो कुनै काम छैन ।
लखन्ती खोलाको सुनसान बाटो । अँधेरोअँधेरो, बाँसका झ्याङ र त्यही तस्बिरमा लडेको छ कमरेड कुमारको मृत शरीर । गहिरिएर तस्बिर हेर्नेले प्रस्ट थाहा पाउँछन्– उनका दुवै हातहरू ठाउँठाउँमा भाँच्चिएका छन्– मानौँ भिडन्त भयङ्कर भएको थियो र भाँच्चिएको हातमा थमाइएको छ सरकारी बन्दुक र बन्दुकसँगै चिर निद्रामा देखिन्छन् कुमार, धर्ती अमाको काखमा कहिल्यै नउठ्नेगरी ।
सम्भवतः कुमारले चढेको मोटरसाइकल हुनुपर्छ उनको ढलेको शरीरनजिक ठिङ्ग ठडिएको ! कुमारको शवनजिकै ठिङ्ग उभिएको मोटरसाइकलाई देख्दा यस्तो लाग्छ– षड्यन्त्रको सिकार भएको घोडचढी दुस्मनको हमलामा परेर मारिएपछि त्यो घोडा आफ्नो मालिकलाई नछोडेर कतै जान सक्छ न मालिकलाई उठाउन नै सक्छ ।
मालिक गुमाएको उदास र निराश घोडा पीडामा वरपर छट्पटाइरहन्छ । त्यस्तै स्थितिमा छ कमरेड कुमारको घोडा (मोटरसाइकल) गोली हानिएको ठाउँ नजिकको बाँसको झ्याङले कालो कर्तुत भनिरहेझैँ लाग्छ । सम्भवतः सादा पोसाकका प्रहरी हुनुपर्छ शवको टाउको पछाडि उभिएका उनीहरूको अनुहार तस्बिरमा हेर्दा यस्तो भान हुन्छ उनीहरू अपराध कसरी छिपाउने सोचिरहेछन् । सञ्चार केन्द्र अनलाइनले प्रकाशन गरेको यो तस्बिर कुमारको हत्यामा संलग्नबाहेक कसैले खिच्न नसक्ने दुर्लभ तस्बिर सार्वजनिक गरेर आफ्नो पहुँच र परिचय बताएको छ ।
षड्यन्त्रकारीहरूको घातक हमलाको सिकार भएर ढलेका रक्तमुच्छेल कमरेड कुमारको तस्बिर देखेपछि मेरो मनको कुनाकुनामा विद्रोह दौडिएको छ र हजार प्रश्नले मलाई घचघच्याएको छ । शरीरको नसानसामा अटेसमटेस भएर रातो रगत दगुरिरहेको छ । मुटुको चाल तीव्र बनेको छ । कापीका पानाहरूमा दौडिरहेको कलमको निब अझ जोडले दबाएर उग्रउग्र कुरा लेखौँ लागिरहेछ । आपराधिक चरित्र बोकेको हत्यारो सरकारको उच्च सूचीमा रहेका कमरेडहरूले आफ्ना कानहरू चनाखो राख्नुपर्छ, आँखाहरू तेज र तिखा राख्नुपर्छ ।
हरपल उच्च सतर्कतामा जनताको माझमा राख्नुपर्छ । कमरेड विप्लवले विज्ञप्तिमा ‘सक्रिय रक्षा’ भनेझैँ । किन कि मान्छेको रगत पिउन बानी परेका नरपिचासहरू हिजोआज गाउँ–सहरमा मृत्युको खेती गर्न दौडिरहेका छन् । कतै हामीभन्दा ऊ अगाडि नहोस् ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला २१ निर्णय
विश्वभर पर्यटनलाई महत्वका साथ लिने गरिन्छ । प्रायः मुलुकहरुले आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार यसलाई बनाएको पाइन्छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई चासोको रुपमा अघि बढाउने कार्य गरिरहेको भान हुन्छ । प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरुले पनि पर्यटन विकास भनेर बजेटहरु छुट्याइएको सुन... जारी राख्नुहोस...
बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्नेलाई कार्बाही गर्न गृहमन्त्रीको आदेश कुर्नपर्छ भने किन चाहियो संघीयता र प्रदेश सरकार ?
अनलाइनमा एउटा खबर पढें । ‘बोक्सीको आरोपमा किशोरी माथि कुटपिट, त्यो अत्याचारलाई जिउँदो लास बनेर त्यहाँ जम्मा भएका मानव भीडले मौन स्वीकृति दिइरहे ।’चटक्कै मुटु चुँडिने खबर । आक्रोश र घृणा एकसाथ ज्वालामुखी बनेर बिस्फोट हुने खबर । किशोरीको ५ मिनेटको भिडियो ४ पटक दोहोर्याएर हेरें हुँला । जति पटक हेर्यो त... जारी राख्नुहोस...
सत्ता बाहिर हुँदा ‘भारतीय बिस्तारवाद’ सत्तामा रहँदा ‘चाकडी र आशिर्वाद’
भूमण्डलीकृत विश्वमा एक्लो टापु बनेर बाँच्न नेपाललाई पनि सम्भव छैन । देश समृद्धिको यात्रामा बामे सर्न शुरू गरेको छ । समृद्धिको प्रथम पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नै हो । जसको लागि विदेशी पुँजीको लगानी अपरिहार्य जस्तै छ । महादेशीय आकारका दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू नेपालमा लगानी गर्न खुट्टा उचालेर... जारी राख्नुहोस...
स्मरणः ‘मेरो दिपक सर ! जसको मृत्यु स्विकार्न सकिरहेको छैन’
प्रा.डा. दिपक भट्टराई सरको र मेरो पहिलो भेट २०३२ साल एन.सि.सि.एन.मा कार्यरत रहँदा हेटौडा नारायणघाट सडक निर्माण स्थलमा भएको थियो । त्यसपछि बि.ई. अध्ययन गर्ने क्रममा २०४० सालमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानमा मेरो गुरुको रुपमा पुनः भेट भयो । हामी ओभरसियरलाई क्यासियर बनाउन बि.ई. अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर सल... जारी राख्नुहोस...
दाजुभाईलाई खुवाउन छाडे दिदीबहीनीले आफ्नै हातको परिकार
बालपनको तिहार जतिबेला म भर्खर बुझ्ने भएको थिएँ । मैले मेरा भाईहरुलाई तिहारमा टीका लगाउन सुरु गरेँ । म मेरो भाइहरुको सबैभन्दा ठूली दिदी । मेरो ममीले मामाहरुलाई जसरी टीका लगाइदिनु हुन्थ्यो म पनि त्यसैगरी टीका लगाउँथे । किनकी ममीले नै सिकाइदिनु हुन्थ्यो । मलाई अझै पनि ताजै लाग्छ, दशैँ सकिएको केही समयपछ... जारी राख्नुहोस...
उपनिर्वाचन विशेषः धरानलाई साझा उम्मेदवारको खाँचो
नेपालीहरूको महान् चाड दशैं तिहार र छैठको रमझम सँगै यति बेला धरानलगायत देशका विभिन्न वडा, गाउँ र नगरहरूमा उप निर्वाचनको सरगर्मी बढेर गएको छ ।यही मङ्सीर १४ गते निर्वाचन आयोगले देशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय, प्रदेश तथा संसदको लागि रिक्त रहेका स्थानहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने भएपछि धरान उपमहानगरपालिकामा पनि... जारी राख्नुहोस...
नैतिकता हराएकाहरुले देश के बनाउलान् खै ?
सभामुख कृष्णबहादुर महरा जवरजस्ती करणीको आरोपमा पदमुक्त भएर हिरासतमा छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री सांसद मोहम्मद अफताब आलम इट्टा भट्टामा मान्छे पोलेर मारेको आरोपमा पक्राउ परे । अर्का सांसद रेशम चौधरी टिकापुर नरसंहारका योजनाकार भन्दै केन्द्रिय कारागारमा जेल सजाय काटिरहेका छन् । भर्खरै राजपाका स... जारी राख्नुहोस...
अमेरीकन, यूरोपीयन र ईण्डियनहरुको शोषण, अत्याचार र ब्यापारघाटाले नेपालको टाट उल्टिंदासम्म 'ऋणको पासो' भन्ने पदावलि पहिले कहिल्यै कसैका मुखबाट सुनिएको थिएन। जब नेपाल र चीनका बिचमा trans-himalayan multidimensional connectivity network मा सहमति भयो र यसलाई बिआरआईको अभिन्न अङ्ग बनाएर चिनियाँ रेलमार्गबाट... जारी राख्नुहोस...
राष्ट्रपति सी भ्रमणः नेपालको विकासमा हातेमालो गर्ने सुनौलो अवसर
२३ वर्षपछि मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय निमन्त्रणामा २ दिने भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको योे भ्रमणले नेपाल र चीन दुई देश विचको पुरानो सम्बन्धलाई अझ मजवुत बनाएको छ । यसका साथै विश्वकै शक्तिशाली मुलुकका... जारी राख्नुहोस...
हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याऔं– चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै प... जारी राख्नुहोस...